HomeLifestyleHealth & Beautyသင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သင် နေ့တိုင်းဝတ်ဆင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ
ဆရာဝန်များက ကျွန်တော်တို့ဗီဒိုထဲက ပစ္စည်းအချို့ကို ဘယ်တော့မှမ၀တ်ဆင်သင့်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဘယ်အရာတွေက ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလဲ?
ကမ္ဘာ့အသုံးအ၀င်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ သံပရိုသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ(၁၆) ချက်
၁။ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ
ဂျင်းဘောင်းဘီ အကျပ်တွေ၊ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ ဘရာဇီယာတွေကို ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံး ၀တ်ဆင်တာက သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်ရောက်မှုက နည်းပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော အ၀တ်အစားများက ပြင်ပကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖျစ်ညှစ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး သွေးကြောတွေကိုရောင်ရမ်းစေတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကြာကြာ ၀တ်ဆင်မယ်ဆိုရင် တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ အ၀တ်အစားများကို ဘယ်တော့မှ မ၀တ်ဆင်ပါနဲ့။ ခပ်ကျပ်ကျပ် ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ၊ ပိန်ကပ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီတွေအစား သဘာဝပိတ်ထည်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီပွပွပုံစံများကိုသာ ၀တ်ဆင်ပါ။
၂။ ကြီးမားပြီး လေးလံတဲ့ အိတ်တွေ
သင်ဘယ်နေရာသွားသွား လေးလံတဲ့အိတ်တွေကို ဆွဲသွားဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သင်ရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်အတွင်း ထည့်မယ့် ပစ္စည်းများအားလုံးကို ပြန်လည်စီစစ်ပါ။ မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို လျှော့ချပါ။
၄၅ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုတဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ဖြစ်ဖို့ သတိရပါ။ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ကို ပခုံးပေါ်မှာ လွယ်ထားရင် ဘယ်ညာပြောင်းလွယ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၃။ နီကယ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာများ
တစ်ချို့လက်ဝတ်ရတနာတွေ သင်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ သင့်အသားအရေ ယားယံတာ သတိထားမိဖူးပါသလား? ဒါက နီကယ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ နီကယ်ကို ရွေနှင့် ရွှေဖြူလက်ဝတ်ရတနာ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ထည့်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လက်ဝတ်ရတနာမဆို မ၀ယ်မီ ပါဝင်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ဆိုင်အတွင်းမှာပဲ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို နီကယ်မပါပဲ ပြုလုပ်ထားတာ ဟုတ်မဟုတ် မေးကြည့်ပါ။ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ၀တ်ဆင်ပြီးနော်က အသားအရေယားယံတာကို သတိထားမိခဲ့လျှင် အရေပြားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဒေါက်အမြင့်တွေက ကြာရှည်စီးတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်း သိကြပါတယ်
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် မစီးရဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် အမြင့် ၄စင်တီမီတာ၊ ၅စင်တီမီတာ ဒေါက်ဖိနပ်တွေကိုဘဲ စီးပါ။ တနေ့လုံးတော့ စီးမထားသင့်ပါဘူး။